mhando 0.9.7.0 – Unocherekedza uye chine kumativi ose, uye SuperProxy Alpha
Chikumi 6, 2015 kubudikidza chipo 2 Comments
New shanduro ndiyo pano!
Please ndiwedzere! Ndapota, Please ndiwedzere! Kufadza vamwe shuga pamusoro.
Sei uchifanira ndiwedzere?
Shanduro iyi unocherekedza Google Marshal rutsigiro, izvo zvinoreva kuti zvoga Google Translation achashanda zvakare.
Shanduro iyi inogadziridza Database pamanyorerwo, izvo zvinoreva Wordpress 4.2 zvinotsigirwa, uye imi vanotarisirwa kuponesa ~ 40% of ano patafura saizi
Isu pakupedzisira tine kwokutanga shanduro imwe mupepeti backend shanduro, izvozvo Achakuratidzai parukungiso vanhu chaiko rakashandurwa uye vachikubvumira nokukurumidza kuongorora uye kuidzima avo.
With vamwe rombo, une nezvechisarudzo nyore ndiwedzere kwenyu Wordpress dashboard. Zvinokurudzirwa kuti iwe negadziriro yeparutivi, sezvo hapana nzira shure shure apedza Database ndiwedzere.
chero quirks, nyaya, matambudziko – ari taura kwatiri kuumba ndiye shamwari yako.
Chii kuti SuperProxy uye nei uchifanira dzinoita izvi?
SuperProxy ndiye redu idzva “Get akapfuma nokukurumidza” zano. Aaa…
chokwadi, tiri kushandisa mugumo nodes kubvumira makambani uye vanhu kuti vakagovera kuwana padandemutande. Tichakomborerwa vachibhadhara motokari iyi, saka kana iwe akatenga nemitambo basa uye une matani mashoko uchatamisa hausi kushandisa, ticharamba unonyatsokoshesa kuti waita kuti chikamu ichi, izvozvo achatitsigira uye zvichida achava kukosha kwako apo. Tichakurukura kubudisa zvakawanda ichi pavanenge vava kuwanika.
uye – kune vamwe changelog:
Woo kusangana unocherekedza
Mugomba ari base64 Encoding uye kuderedza kukura mapeji translatable
Widget unocherekedza kunoita Mireza zvinoratidza zvakarurama kana zvisina kururama bhokisi sizing raishandiswa
Kubviswa pamberi mugumo mberi kamwechete, zvakanga kashoma kuona kana kushandiswa uye akaita zvakawanda dambudziko pane kwaikosha
3 mitauro mitsva rinotsigirwa Bing
Nzvimbo shortcode Ose sn
kudzivisa shanduro asiri rwezuva / json kugutsikana unocherekedza nyaya nevamwe Download neAdhoni plugins
Tsigirai placeholder chizenga, kuvonga Mark Serellis
Vamwe kutsigira Business Directory plugin
saka – Nakidzwa shanduro iyi, uye regai kuva mweni, tizivise ainoita imi.
Ina Under: Release zviziviso, Software Updates Tagged With: shandurudzo google, kuduku, rusununguko